ရွှေတိဂုံစေတီတော်ရှိ ကြာမှောက် ကြာလန်မှ ရွှေစင်ပြား ကိုးပြားကို စစ်ဆေးရာ မူလရွှေပါဝင်နှုန်းထ?? - Yangon Media Group
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ရှိ ကြာမှောက်ကြာလန်မှ ရွှေစင်ပြား ကိုးပြားကို ပညာရှင်အချို့စစ်ဆေးခဲ့ရာ မူလလှူ ဒါန်းထားသော ရွှေပါဝင်နှုန်းထက် ပိုများနေသောရလဒ်များထွက်လာသဖြင့် အရည်အသွေးအစစ်အမှန်ပေါ်စေရန် ပါဝင်စစ်ဆေးမည့် သမာသမတ်ကျသောတတိယအဖွဲ့အစည်းကို ဖိတ်ခေါ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ”ရွှေစင်ပြားများ အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန် ကုသိုလ်ယူဆောင်ရွက်လိုသည့် ပညာရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်ခြင်း” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဌာန၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေ့ခ်ျတွင်တင်၍ ဖိတ်ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ရှိကြာမှောက်ကြာလန်တွင် ကပ်လှူပူဇော်ထားသော ရွှေစင်ပြားများသည် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှ ကပ်လှူပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုစဉ်က ရွှေပါဝင်မှုမှာ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းဟုသိရှိရကြောင်း၊ ယင်းရွှေစင်ပြား ၃၉၂၁ ချပ်အနက် ကိုးချပ်အား ပညာရှင်အချို့က အရည်အသွေးစစ်ဆေးရာ ၉၈ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင် နှုန်းရလဒ်ထွက်ပေါ်ခြင်းသည် မူလရှိပြီးသား ရွှေပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း ထက် ပိုမိုနေကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါရွှေစင်ပြားများသည် သဘာဝအရ ရေ၊ လေ၊ နေ၊ မိုးဒဏ် ကိုးနှစ်ကြာ ထိတွေ့ခံစားပြီးမှ မူလအရည်အသွေးထက် သာလွန်ကောင်းမွန်နေသည့်ရလဒ်မှာ သတိပြုစဉ်းစားရမည့် အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိရကြောင်း၊ ယင်းရွှေစင်ပြား ၃၉၂၁ ချပ်၏ အရည်အသွေးအစစ်အမှန်ပေါ်ပေါက်စေရန် တတိယအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးနိုင်မှသာ ပကတိအရှိအတိုင်း ရလဒ်မှန်ထွက်ပေါ်လာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရေးသားထားသည်။
ထုတ်ပြန်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန၊ သာသနာရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်ဆန်း ဝင်းက ”ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်လိုက်တာတော့ ကျွန်တော်မသိလိုက် ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဌာနက ထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ ထုတ်ပြန် ချက်ထဲကအတိုင်းပါပဲ”ဟု ပြောသည်။ ရွှေစင်ပြားများ၏ အရည်အသွေးမှန်ကန်စွာ စစ်ဆေးနိုင်ရေး အတွက် ဌာနဆိုင်ရာများမှ သမာသမတ်ကျသောပညာရှင်များနှင့် အများပြည်သူထဲမှ ကုသိုလ်ယူဆောင်ရွက်လိုသည့် ပညာရှင်များ ပါဝင်သောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ ရွှေစင် ပြား စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွင် စိတ်ဝင်စားသူ ကုသိုလ်ယူဆောင်ရွက် လိုသည့် ပညာရှင်များအား သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး ဌာနမှ ဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်းနှင့် ဆက်သွယ်စာရင်းပေးနိုင်ကြောင်း အများပြည်သူသိရှိစေရန် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထား သည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နီပေါဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်က လေဆိပ်တွ?
ဖုယွင် အထည်ချုပ်စက်ရုံ သပိတ်မှောက် အလုပ်သမားများ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲခံရ၊ အလုပ်သမား ၃၂ ဦး ဒဏ်
ဘကုန်းနဲ့ မ . . .
လိဂ်ဖလား ပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲကိုပါ အာဆင်နယ် ကွင်းလယ်လူ ရမ်ဆေး လွဲချော်ရဖွယ်ရှိ
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ပြုံယမ်းမြို့တွင် ပူးတွဲဖျော်ဖြေ တင်ဆက်ခဲ့သော တောင်ကိုရီးယား အဆို